Things that go 'Boom!' ~ Pet Rescue manapoaka tsipoapoaka - Pet Rescue Saga
Ny iray amin'ireo fitaovana mora raisina indrindra no afaka mampiasa in Pet Rescue no Firecracker, Raha mijery tsara ka hatrany ambany ny lamba ho hitanao kely metatra izay tokony sakafo amin'ny hevitra, ny lehibe kokoa ny tsikombakomba ny tsara kokoa. Fenoy ity amin'ny alalan'ny fanesorana metatra biriky sy kely firecracker niseho, vatosoa kely ity dia tena sarobidy, fotsiny manondro azy eo andry tokony hanadio (tahaka ny anankiray amin'ny Doe maso alika eo an-tampony mikasika ny ho tipped eny) ary izany andry anisan'izany misy boaty vy na fitaratra toe-javatra ho an'ny caged destroyed..except na mihidy biriky, dia mitaky mamoha aloha.
Azonao atao ny mampifanaraka ny cracker ny marina tsanganana sy mifidy ny maitso mifidy ny afo!
Ny vaovao tsara dia biby fiompy toa tia afomanga ary tena faly Aza kivy noho ny fipoahana sy scurry eny ka hatrany ambany (*mariho izany dia tsy mihatra amin'ny tena fiainana, dia mafy indrindra alika pyrotechnophobes!). Ny mianatra ny fomba hamoronana ireo manapoaka tsipoapoaka haingana sy mahomby ary mahalala, rehefa hampiasa azy ireo sy ny fotoana nahantona tamin'ny azy ireo angamba lehibe iray amin'ireo fahaiza-manao io lalao!
Ianao dont maintsy mampiasa ny Firecracker raha vao hita, ny tsy mandeha na aiza na aiza, fa foana fotsiny ao an-tsaina fa afaka ihany no iray isaky ny mandeha, intsony mahazo hevitra dia tsy ho voatahiry ao amin'ny metatra. Afaka manomboka fitadiavam-bola fotsiny cracker iray hafa indray mandeha ny voalohany no Niainga. Noho izany dia tahaka ny Niainga ny biscuits araka izay hita. Raha manana biby mitaiza kely eo amin'ny rindriny ny eto an-tany, na sodina dia afaka midona amin azy eny amin'ny alalan'ny fametrahana ny firecracker ny andry ho amin'ny ankavia (Aza manontany ahy ny antony dont biby fiompy ho latsaka amin'ny ankavanana!)
Mametraka avy eny ambony cracker fotsiny resaka fifidianana na ny maitso mifidy, na raha hanova ny saina sy te-nahantona amin'ny azy fotsiny namely ny mena 'X'. Tadidio fa ny vato dont lavo hidina mahitsy foana, dia manana fironana ny mba Cascade ho any an-toerana, izay afaka manimba ny Groove matetika raha miezaka hanorina lehibe sasany tsikombakomba. Raha toa manakana ireo eo amin'ny farany ambany amin'ny birao miaraka na inona na inona mihoatra noho ny azy ireo mameno ny toerana izy ireo scoot over (indray ho amin'ny ankavia) dia hiaraka amin'ny hafa ny biriky sisa tavela . Izany no tena mora raisina foana ao an-tsaina indrindra rehefa mila hanadio iray isan-jaton'ny vato hiala amin'ny lalana hanatanterahana ny zava-kendrenao.